တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝကို ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားကြတဲ့ လွှမ်းပိုင်နဲ့ မေမြင့်မိုရ် - Cele Platform
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝကို ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားကြတဲ့ လွှမ်းပိုင်နဲ့ မေမြင့်မိုရ်
ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. လတ်တလောပရိတ်သတ်တွေကြားမှာရေပန်းအရမ်းစားနေတဲ့ လူငယ်အနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ လွှမ်းပိုင်နဲ့ မေမြင့်မိုရ် ကိုမသိတဲ့သူမရှိပါဘူးနော်။ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်ပြီးတော့ အခြေတကျဖြစ်နေကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုပေါင်းများစွာကိုရရှိထားကြသူလေးတွေပါ
လွှမ်းပိုင်ဟာဆိုရင် လူငယ်ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာရေပန်းစားတဲ့သီချင်းတွေ ခေတ်ကာလရေစီးကြောင်းနဲ့ အရမ်းကိုလိုက်ဖက်ကိုက်ညီတဲ့သီချင်းတွေကို သီဆိုတတ်တဲ့ နိုင်ငံကျော် Hip Hopအဆိုတော်တစ်ယောက်ပါနော်။ မေမြင့်မိုရ် ဟာလည်း တေးသီချင်းတွေ ရုပ်ရှင်တွေ နဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲပေါင်းများစွာမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို တစ်ခဲနက်ရရှိထားခဲ့တာပါနော်။
အခုဆိုရင် သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကားကိုလည်း အတူတူရိုက်ကူးနေကြပါတယ် ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။ ” ကြည်ဖြူမယ်ဆိုရင် “ဆိုတဲ့ ဒီဇာတ်ကားကြီးထဲမှာတော့ သူမတို့ဟာ ပျော်စရာတွေပြည့်နှက်နေခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝလေးကို တစ်ဖန်ပြန်ပြီး ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်နော်။ ခပ်အေးအေးနေတတ်တဲ့ ကောင်လေး ဖြစ်တဲ့အဆိုတော်လွှမ်းပိုင်နဲ့ ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့လှတဲ့ မေမြင့်မိုရ်တို့ရဲ့ ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်း ဇာတ်ကားထဲမှာမလွဲဧကန် မြင်တွေ့ရအုန်းမှာပါ။ ကဲ… ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ ရိုက်ကွင်းအမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း ချစ်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။Myanmarload
ခဈြပရိတျသတျကွီးရေ…. လတျတလောပရိတျသတျတှကွေားမှာရပေနျးအရမျးစားနတေဲ့ လူငယျအနုပညာရှငျဖွဈတဲ့ လှမျးပိုငျနဲ့ မမွေငျ့မိုရျ ကိုမသိတဲ့သူမရှိပါဘူးနျော။ နှဈယောကျစလုံးဟာ အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါမှာ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျရပျပွီးတော့ အခွတေကဖြွဈနကွေပွီး မွနျမာနိုငျငံက ပရိတျသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုပေါငျးမြားစှာကိုရရှိထားကွသူလေးတှပေါ။
လှမျးပိုငျဟာဆိုရငျ လူငယျပရိတျသတျတှကွေားမှာရပေနျးစားတဲ့သီခငျြးတှေ ခတျေကာလရစေီးကွောငျးနဲ့ အရမျးကိုလိုကျဖကျကိုကျညီတဲ့သီခငျြးတှကေို သီဆိုတတျတဲ့ နိုငျငံကြျော Hip Hopအဆိုတျောတဈယောကျပါနျော။ မမွေငျ့မိုရျ ဟာလညျး တေးသီခငျြးတှေ ရုပျရှငျတှေ နဲ့ဇာတျလမျးတှဲပေါငျးမြားစှာမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပွီး ပရိတျသတျတှရေဲ့အားပေးမှုကို တဈခဲနကျရရှိထားခဲ့တာပါနျော။
အခုဆိုရငျ သူတို့နှဈဦးစလုံးဟာ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတဈကားကိုလညျး အတူတူရိုကျကူးနကွေပါတယျ ခဈြပရိတျသတျကွီးရေ။ ” ကွညျဖွူမယျဆိုရငျ “ဆိုတဲ့ ဒီဇာတျကားကွီးထဲမှာတော့ သူမတို့ဟာ ပြျောစရာတှပွေညျ့နှကျနခေဲ့တဲ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသားဘဝလေးကို တဈဖနျပွနျပွီး ရောကျရှိခဲ့ပါတယျနျော။ ခပျအေးအေးနတေတျတဲ့ ကောငျလေး ဖွဈတဲ့အဆိုတျောလှမျးပိုငျနဲ့ ယဉျယဉျလေးနဲ့လှတဲ့ မမွေငျ့မိုရျတို့ရဲ့ ပီပွငျတဲ့သရုပျဆောငျခကျြတှကေိုလညျး ဇာတျကားထဲမှာမလှဲဧကနျ မွငျတှရေ့အုနျးမှာပါ။ ကဲ… ဒီရုပျရှငျဇာတျကားကွီးရဲ့ ရိုကျကှငျးအမှတျတရပုံရိပျလေးတှကေိုလညျး ခဈြပရိတျသတျတှအေတှကျ မြှဝတေငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော။Myanmarload
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေနဲ့ ကျက်သရေရှိရှိ လှနေတဲ့ ဝိုင်းလေး